Macluumaadka Bankiga Dhexe ee Macluumaadka Badbaadada Hantida iyo Qarsoodiga
Macluumaadka Bankiga Dhexe
Bangiga bangiga wuxuu abuurayaa xisaab bangi oo ka baxsan waddanka uu degan yahay. Ujeedada badanaaba waa ilaalinta hantida, kaydka canshuurta (iyadoo ku xiran waddanka hantida koontada), sirta maaliyadda iyo qorsheynta guryaha. Sababtoo ah 96% ee dacwadaha adduunka ee ka dhacaya Maraykanka, dad badan oo Maraykan ah ayaa raadinayay awood sharci oo ka baxsan xudduudkooda si ay u hantiyaan hantidooda xaalado ammaan ah.
Mararka qaar, majallada warbaahintu waxay ka hadlaan bangiga bankiga. War saxaafadeedka ayaa iibiya xayaysiin yar oo ka yar war-faafin, sidaas darteed inta badan diiradda ayaa u muuqata in ay ku sii jeedaan dhinaca bidix ee bangiga baddaha ah: kali-taliyeyaasha shisheeye ee qarinaya guulaha sharci darrada ah, ganacsatada aan sir-doonka ahayn ee si qarsoodi ah uga soo baxa xannuunada, faa'iidada canshuurta, iwm. sheekooyinka waa in ay sameeyaan qawaaniinta ay soo saaraan dowladda Mareykanka. Qawaaniintu waxay jirtey sanado badan si ay u xakameeyaan qulqulka canshuuraha, waxay u gudbiyaan dhaqdhaqaaqyada argagixisada iyo lacagta la dhaqay ee daroogada iyo ilo kale oo aan sharci ahayn. Dabcan, xukuumadda federaalku waxay u baahan tahay inay qaaddo tallaabo marka ay la macaamilayso xisaabaadka noocaas ah.
Inkasta oo sharciyadani loola jeedo in lagu mamnuuco waxqabadyo sharci darro ah, hannaan-bixiyeyaasha xukuumaddu ma ay ka walwalsanyihiin shakhsiyaadka raba inay isticmaalaan bangiga badda oo ay qayb ka yihiin qorshaha badbaadinta hantida. Isticmaalka bangiga badda oo ay weheliso hay'ado caalami ah sida LLCs iyo kalsooniddu waxay noqotaa mid aad uwanaagsan, sababtoo ah hanjabaadda dacwada waxay kordheysaa.
Maxaa isbeddel siyaasadeed la sameeyay iyo meesha ay diirada saaraan waxay ku xiran tahay dalka. Maraykanku wuxuu isku dayayaa in uu kormeero dhaqdhaqaaqyada dalal gaar ah oo ay u arkaan in ay u badan tahay khataraha argagaxisada iyo hanjabaadaha dembiga, ayna u badantahay in ay kormeeraan wadamada ay leedahay xiriir saaxiibtinimo.
Tusaale ahaan, dowladda Swiss, oo ah waddan sida caadiga ah leh shuruudo aad u wanaagsan oo lala leeyahay Mareykanka, looma kormeero. Waxay ogolaatay in isbedel siyaasadeed oo xadidan. Ficilkan micnaheedu waa in bangiyada Swisska, inkastoo ay weli bixiyaan qarsoodi xoog leh oo qarsoodi ah dadka haysta xisaabaadka, waxay hoos u dhigayaan qaar ka mid ah gaashaanka ilaalinta qarsoodiga ah marka koontada ay lug ku leeyihiin hawlaha sharci darada ah.
Dalalka Bixinta Banking Offshore
Waxaa jira dhowr degmo oo bixiya xisaab bangi oo ka baxsan dadka ajnabiga ah, oo ay ku jiraan kuwa ku sugan Mareykanka. Qaar badan oo ka mid ah wadamadani maaha mid xiiso u leh dowladda Mareykanka si loo sugo baaritaan ku dhow mar kasta oo mustaqbalka dhow. Intaas waxaa dheer, badi kuwa liiska ku yaala waxay leeyihiin sharciyo qarsoodi ah oo xoog leh si ay u ilaaliyaan hawsha sharciga ah ee kuxiran ee kuxiran. Qaar ka mid ah wadamadaan waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidneyn:
English Channel Islands of Jersey iyo Guernsey
Shirarka "Offshore" ee Maraykanka
Sidoo kale liiska dalalka kor lagu soo bandhigay, waxaa kale oo jira fursado dadka ku nool meelo ka baxsan Mareykanka si ay u helaan heer la mid ah ilaalinta koontada bangiyada oo la mid ah tan ay bixiso xisaabaadka bangiga bankiga. Tusaale ahaan, Delaware wuxuu keenaa akhbaarta akoontiga bangiyada ee debedda ah, inkastoo aaney dhammaan, ee ilaalinta iyo awoodaha, kuwaas oo sida caadiga ah lagu ogaado kuwa isticmaala xisaabaha bankiga. Qaar ka mid ah dawlado kale oo ka shaqeeya iyada oo aan cashuurta dakhliga ee shirkadda waxay sidoo kale keeni karaan faa'iidooyinka xisaabaadka bangiga. Qaar ka mid ah dawladahan waxaa ka mid ah Nevada, Washington, iyo Wyoming. Sidaa darteed, qof Maraykan ah oo aan diyaar u ahayn inuu tago xeebta ama qofka ku nool meel ka baxsan Maraykanka wuxuu leeyahay ikhtiyaarro gudaha Maraykanka ah.
Faa'iidooyinka Lahaanshaha Hantidhawrka Bangiga Bankiga
Koontada bangiga dibadda ama koontada bangiga ee laga furay meel ka baxsan waddanka la haysto ee aqal-kireystaha waxaa loo isticmaalaa sababaha soo socda:
Badi akoonada bangiga ee bangiga ayaa bixiya adeegyo badan oo kharash yar ka yar xisaabaadka bangiga ee Maraykanka. Baanka dibadda ayaa caadi ahaan bixinaya dulsaarka dulsaarka marka loo eego sida caadiga ah lagu bixiyo Maraykanka. Waa maxay sababta? Sababtoo ah kharashyada lagu shaqeynayo baananku waxay ku yar yihiin dalal badan oo ajnabi ah. Tani waxay keenaysaa lacag dheeraad ah oo ku hartay khasnadda bangiga si ay u bixiyaan bixiyeyaasha.
Xuduudo badan oo u oggolaanaya bangiga dakhliga ee ajnabiga ee ajnabiga ayaa caadi ahaan la yimid heerka canshuurta hooseeya, soo jiidashada shirkado badan iyo shakhsiyaad gaar ah si ay ganacsi ula sameeyaan. (Xasuusnow in dadka Maraykanku ay canshuur ku yihiin dakhliga guud ee adduunka iyada oo aan loo eegin haddii ay tahay ama aan la helin lacagtii "dib loo soo celiyay" ama aan.)
Lacagta amaahashada ee dulsaarka dulsaarka.
Qawaaniinta yaryar markaad amaahdaan lacag.
Inta badan, bangiyada badda waxay bixiyaan sir badan oo qarsoodi ah waxayna badanaa ku adkeeyaan dadka ka baxsan inay helaan macluumaad ku saabsan shirkadda ama shakhsiga haysta koontada. Qarsoodigu wuxuu ku kala duwan yahay waddanka.
Dalalka leh dawlado xasilooni iyo barwaaqo ah waxay la keenaan heer ay ka difaacaan dhibaatooyinka dhaqaale, siyaasadeed iyo dhaqaale ee laga yaabo inay ka dhacaan mid ka mid ah waddanka hooyo. Dabcan, dalalkan xasillooni waxay bixiyaan doorashooyin wanaagsan oo maalgashi ah labadiinaba adiga iyo ganacsigaaga. Maaddaama dhaqaalaha Maraykanku uu sii wadi doono isbedbeddelka, inuu isku dayayo inuu soo jiido dhaqaalihii ugu danbeeyay, fikraddani waxa ay noqotaa mid sii kordheysa oo soo jiidasho leh labada dhinac ee khaaska ah iyo ganacsigooda.
Waxaa jira fursado maalgashi oo dheeraad ah. Taas bedelkeeda waxa maalgashadayaasha laga yaabo in loo soo bandhigo akoontiga bangiga ee dalkiisa hooyo, shakhsiyaad badan oo go'aaminaya inay isticmaalaan xisaabaadka bangiga bankiga waxay ogaadaan in xisaabyadani aysan haysan kaliya qaabdhismeed fiican, laakiin heerka fursadaha isbeddelka. Tusaale ahaan, bangiyada badaha badankood waxay bixiyaan koontooyinka dulsaarka dulsaarka, fursadaha maalgashiga suuqa saamiyada, biraha qaaliga ah, iwm. Dhammaantood waa hal saqaf.
Bangiyada internetka waa la heli karaa.
Macaashka macaamiisha. Kuwa haysta akoonka bangiga oo badan sida adeegga macaamiisha ayaa laga heli karaa aag waqti oo isbedbedela oo ka yimaadda wadanka hooyo.
Inta badan dadka isticmaala xisaab-celinta bangiga bankiga ayaa furan xisaabaadkooda hay'adaha sharci-darrada ah. Hay'adahani waxay ku kala duwanaan karaan shirkadaha offshore iyo LLCs si ay u ilaaliyaan hantida magangelyada hantida iyo aasaaska, iyadoo ku xiran baahida qofka.
Xisaabaadka dibadda waxaa sidoo kale loo isticmaalaa shaqaale ay shaqaaleysiiso shaqaalaha badda, shaqaalaha caalamiga ah, dadka safarka ah, iyo dadka ajnebiga ah.
Milkiilayaasha shirkadaha waxay sidoo kale ogaadaan in xisaabaadka bangiga dakhliga ay bixiyaan faa'iido marka la isticmaalayo nidaamka dib-u-habeyn dhaqaale. Shirkadaha isku dayaya inay sidaan sameeyaan waxay isticmaali karaan akoonnada bangiyada oo ay adeegsanayaan hay'ado badan oo caalami ah, iyaga oo u oggolaanaya inay muujiyaan faa'iidada dhaqaale ama khasaaro iyadoo ku xiran hababka xisaabinta ee loo isticmaalo. Dabcan, waafaqsan sharciga iyo canshuur buuxa si adag ayaa loogu talagalay.
Sabab kale oo ay shirkaduhu u isticmaalaan xisaabaadka bangiga dibadda ayaa waxay sabab u tahay xoriyad dheeraad ah oo ku dhexjirta shuruudaha maaliyadeed ee shirkadda, oo ay ku jiraan awoodda si dhaqso ah oo si sahal ah ugala baxaan shaqaalaha iyo alaab-qeybiyeyaasha gudaha shisheeye shisheeye.
Ogow sharciyadaada canshuurta
Marka laga reebo macluumaadka kor ku xusan, shakhsiyaad badan iyo mabaadi'da shirkadaha doonaya inay sameystaan ​​xisaab bangi oo bankiyada ku yaala waxay u hoggaansamayaan caqiidada been abuurka ah ee faa'iidada, faa'iidada raasumaalka, iyo noocyada kale ee dakhliga laguma canshuuro ee waddanku ku leeyahay. Fikraddan iyo ku guul daraysiga bixinta canshuur ka mid ah waddankeeda keligiis ma noqon karto oo keliya maaliyad ahaan wax ku ool ah shirkadda lafteeda, laakiin kiisaska intooda badan, sidoo kale waa sharci darro.
Tusaale ahaan, dalka Mareykanka waxaa jira qawaani canshuureed oo u baahan muwaadiniinta Mareykanka inay soo sheegaan wixii lacag ah ee laga sameeyey waddamo kale, sida lagu sheegay foomka canshuurta Mareykanka 1040:
"Waa inaad ka warbixisaa dakhliga aan la shaqeyn, sida dano, hantidhawrka, iyo hawlgabka, oo laga helo ilo ka baxsan Mareykanka, haddii aan laga dhaafin sharciga ama heshiiska cashuurta. Waa inaad sidoo kale soo sheegtaa dakhliga la kasbaday, sida mushaharka iyo talooyinka, laga helo ilo ka baxsan Maraykanka. "
Waxaa intaa dheer, oo kuxiran Jadwalka B, foomka canshuurtaada ayaa si gaar ah u codsanaya, iyada oo la eegayo qaybta Rabshadaha iyo Dakhliga caadiga ah, oo aad u soo gudbisid dulsaar iyo qaybinta koontooyinka ama sanduuqyada ku yaala xeebta ku yaala.
Sidaa darteed, inkasta oo ay badanaa la qabtey khalad ah in xisaab bangiga dibadda laga reebo bixinta canshuuraha Mareykanka, qof kasta oo buuxinaya foomka canshuurtu wuxuu arki karaa in caqiidadani khalad tahay. Habka sharci ee saxda ah waa in la soo sheego dhammaan dakhliga lagu kasbaday. Dhab ahaan, waddamada badankood waxay u baahan yihiin muwaadiniintooda iyo / ama dadka deegaanka si ay u soo sheegaan wixii dakhli ah ee ka baxsan xudduudkooda.
Maxay Adeegyada Bixinayaan Bangiyada?
Bangiyada badankooda waxay bixiyaan adeegyo noocyo kala duwan sida bangiyada Mareykanka. Plus, xaalado badan, waxay bixiyaan wax badan. Si kastaba ha noqotee, waxay kuxirantahay xukunka bangiyada dibedda, shuruucda iyo fursadaha way kala duwanaan karaan, xaddidaadaha lagu soo rogay wadanka Mareykanka ayaa sidoo kale isbedbeddeli kara.
Badanaa, bangiyada badankooda waxay bixiyaan:
Maareynta maareynta maalgelinta
Hantidhowrka hanti ma guurtada iyo adeega nadiifinta
Xisaabaadka hawlgabka iyo ikhtiyaarka kaydka
Maalgalinta ganacsiga caalamiga ah, isweydaarsiga sarrifka, iyo lacagaha kala duwan
Dhisida koontada bangiga badda waa caadi. Marka hore, samee shirkad dibadda ah ama jaangooyo la dhiso. Shirkaddu sida caadiga ah uma baahnid in lagu sameeyo isla xeerka koonfureed ee koontada sida koontada bangiga. Tan labaad, xisaabaadkaas badan ayaa la sameyn karaa iyada oo aan loo baahnayn inay safraan. Sidaa daraadeed, awoodda ay u leedahay inay sameyso mid ka mid ah xisaabyadani waa mid fudud oo fudud. Sababtoo ah dalal kala duwan oo aad kala dooran kartid, waxaad kuxiran kartaa wadankaaga xulashada si aad ugu habboonaato baahiyahaaga.
Raadi Tilmaansiin Farsamo
Bangiyada baddan badankood ma furi doonaan koontooyinka bangiga ee dadka ajaanibta ah. Qaar waxay ku fiicanyihiin in ay la shaqeeyaan, qaarna way yar yahiin. Sidaas darteed hubi inaad ka hesho caawimaad khabiir ku takhasusay bangiga bankiga. Waxaa jira tiro ku qoran boggan iyo sidoo kale foomka si loo dhamaystiro wadahadal lala yeesho khabiir khibrad leh oo ku siin kara macluumaadka loo baahan yahay si go'aan looga gaaro.
Haddii aad ka fekereyso sameynta xisaab bangiga dibedda ah oo aad ka gaabisid qaar ka mid ah jaraa'idka wargeysyada qaarkood, ogow in raacitaanka, haddii la fuliyo si sharci ah oo ammaan ah, waxay noqon kartaa mid aad u fiican oo faa'iido leh kuwa doonaya xorriyadda dhaqaalaha, ilaalinta hantida, iyo xaddidaadyo yar. Qiyaastii konton boqolkiiba caasimadda adduunka ayaa ka dhigaysa iyada oo loo marayo akoonnada bangiyada. Taas macnaheedu waa in xisaabaadka bangiyada ee debeddu ay yihiin kuwo caan ah oo caadi ah.
Xisaabaadka bangiga bankiga ayaa hadda haysta qiyaastii lix iyo lix boqolkiiba hantida adduunka. Tiradani waxaa ka mid ah shirkado badan oo waaweyn oo ku yaala Mareykanka waxayna wali isticmaalaan xisaabaadka bangiga dibadda si ay uga faa'idaystaan ​​faa'iidadooda. Qaddarka lagu qiyaasey lacagta Maraykanka ayaa la rumeeysan yahay in lagu heysto bangiyada xeebaha oo qiyaastoodu tahay ilaa lix trillion oo dollar, taas oo ah hanti weyn oo hanti adduunka ah.